Home Wararka Gudaha Xog: FAHAD YAASIIN oo ka dhoofay Muqdisho kahor xil wareejinta FARMAAJO
Taliyihii hore ee hay’adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo saaxiibkiisa gaarka ah xildhibaan hore Cabdiraxmaan Dheere ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Fahad iyo saaxiibkiis ayaa saaka Muqdisho ka raacay diyaaradda Turkish Airline oo Maanta safar toos ah ku tageysay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ma cadda hadidi Istanbul ay ku hakan doonaan oo kaliya iyo haddii safarkoodu halkaas yahay.
Waxaan sidoo kale cadden haddii Fahad uu si toos uga guuray Muqdisho oo uu dibad joog noqonayo wixii hadda ka dambeeya iyo inuu soo laabanayo, balse waxaa la sheegay inuu saaxiibadiis dhow dhow u sheegay inuu safar gaaban galayo uuna dib usoo noqonayo maalmo kadib, balse lama xaqiijin karo run ahaanshaha hadalkaas.
Safarka Fahad uu maanta kaga baxay Muqdisho ayaa kusoo aadayo maalin kahor inta uusan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la wareegin xafiiska.
Fahad Yaasiin oo mar ahaa ninka ugu awoodda badan siyaasadda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn gacmo maran kasoo istaagay loolankii siyaasadda Soomaaliya ee muddada soo jiitamayey oo dhinac kasta looga adkaaday.
Waxaa isaga shaqsiyan laga hor-istaagay inuu noqdo xildhibaan, taasi oo dhabbaha usii xaari laheyd inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, kadib markii guddiga doorashada heer federaal ay sharci-darro ku qeexeen habkii loogu soo doortay Beledweyne.
Inkasta oo guddiga ay ku dhegeen, haddana waxaa aad loo rumeysan yahay in ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ahaa qofkii ka dambeeyey in Fahad loo diido xildhibaannimada.
Waxaa kadib isaga iyo madaxweyne Farmaajo looga adkaaday loolankii guddoonada laba aqal ee baarlamanka, oo dhammaantood ay kusoo baxeen xubnaha mucaaradka.
Albaabkii Fahad iyo Farmaajo ayaa ugu dambeyn soo xirmay markii madaxweyne Farmaajo looga adkaaday doroashadii madaxweynaha, taasi oo xaqiijisay in shan sano kadib aysan wax saameyn ah ku laheyn siyaasadda Soomaaliya.
Ma cadda hadda qorshaha xiga ee Fahad, oo lagu yaqaan inuu yahay nin xariif siyaasadeed ah, oo horey ugu guuleystay inuu soo saaro ama wax ka dhiso laba madaxweyne; Xasan Sheekh 2012, iyo Farmaajo 2017.
Waxaan sidoo kale caddeyn halka uu ku dambeyn doono kursiga xildhibaan ee Fahad laga hor-istaagay ee HOP086 oo weli aan go’aan laga gaarin.
Sidoo kale, safarka Fahad ayaa kusoo aadayo xilli Faarax Sheekh Cabdulqaadir uu doonayo inuu qaato kursiga HOP086, waxaana jiro qorshe mar kale lagu qabanayo doorashada kursigaas, oo uu baarlamankii 10-aad ku fadhiyey Faarax
Previous articleCanan Kaftancioglu: Waa tuma haweeneyda laf dhuun gashay ku noqotay Erdogan?
Next articleDowlad noocee ah ayuu Farmaajo berri ku wareejinayaa Xasan Sheekh?
Tottenham oo heshiis la gaartay Everton si ay ula soo wareegto...
Xildhibaanada Baarlamaanka Labada Aqal oo shir deg deg ah berri...
Diyaaradaha Kenya oo duqeymo ka fuliyay degaano katirsan Gobolka Gedo